Tayada - Farsamaynta Filter
Tayada shaandheynteena u beddel Tayada Biyahaaga
Raadinta Sare ee Tayada
Tayada sare waxay ka timaadaa tiknoolajiyada saxda ah, nidaamka maareynta oo kaamil ah iyo kormeerid adag. Waxaan sii wadnaa raadinta tayada inta lagu guda jiro geeddi-socodka labadaba alaabta ceyriinka ah ee soo socota iyo wax-soo-saarka ama alaabta la dhammeeyay. Alaabtayada waxaa la siiyay shahaadooyinka soo socda: NSF, WQA, IAPMO, WRAS, ACS, MOH, CCC, CQC, CE, EMC, ROHS, GS, PCT, IMQ, UL, FCC, CB, NOM, SIRIM. JBE (ST), TISI, Nabadgelyo, iwm.
The R&D ee Filter Tech waxay si adag u raacdaa heerka iyo qawaaniinta warshadaha daaweynta biyaha. Waxaan u qaadanaa maareynta mashruuca sidii dhidibka ugu weyn, waxaanna adeegsannaa Shan Qalab iyo fikradaha injineernimada ee APQP, FEMA, MSA, PPAP iyo SPC si aan u hirgelino xakamaynta hannaanka macmiilka ku wajahan si alaabtu u dabooli karto baahida suuqa si dhakhso leh oo sax ah hubinta tayada.
Shaybaadhka Dhismaha si loo Hagaajiyo Heerka Daryeelka
Xarunteena tijaabada sifeynta biyaha gudaha ayaa la aasaasay iyadoo la raacayo NSF, WQA iyo heerarka shahaadooyinka kale ee awoodda leh. Awooddeena maareynta iyo tijaabinta waxay la jaanqaadeysaa heerarka caalamiga ah ee la aqoonsan yahay oo loogu talagalay badeecadaha la xiriira biyaha. Sheybaarku wuxuu leeyahay sideed qalab oo tijaabo NSF ah, kuwaas oo samayn kara kormeer kala duwan oo ku saabsan badbaadada maaddada, nabdoonaanta qaabdhismeedka, badbaadada shaqada, badbaadada korontada, badbaadada gaadiidka iyo waxqabadka sifeynta, oo ay ku jiraan in ka badan boqol imtixaan oo kale, tusaale ahaan, xoogga dhismaha , anti-gabowga, acoustic, microbiology, iswaafajinta electromagnetic, iwm.
Bishii Sebtembar 2018, shaybaarkayaga tijaabada ah ee guriga dhexdiisa ah waxaa caddeeyay Adeegga Aqoonsiga Qaranka ee Shiinaha ee Qiimaynta Ku-habboonaanta (CNAS)
Faa'iidooyinka macaamiisha ayaa dadaalkan ka dhiga mid qiimo leh. Waxay yareysaa halista iyadoo noo oggolaaneysa inaan hore wax uga qabanno arrimaha imaan kara, sidaas darteed, iyadoo bixineysa hubinta tayada la isku halleyn karo, waxay gacan ka geysaneysaa yareynta cabashooyinka badeecada iyo inay kuu keydiso kharashyada iibka kadib.
Shahaadada ka hortagga khatarta
Mashaariicda u baahan shahaado waxay kaloo ka faa'iideysan karaan shaybaarkayaga, maadaama aan ku wadi karno imtixaannada guriga dhexdiisa ka hor imtixaannada hay'adaha shahaadooyinka ee awoodda leh. Tani micnaheedu waa wax badan adiga adiga oo iska ilaalinaya dib -u -gudbintaada guuldarooyinka imtixaanka intii suurtogal ah si loo dardargeliyo nidaamka shahaadaynta.
Liiska wax soo saarka iyo shahaadaynta micnaheedu waa wax badan shaandhaynta biyaha. Shaandheeyeyaasha buuxiya halbeegga ayaa awood u leh inay yareeyaan soo-gaadhista wasakhda la xiriira caafimaadka. Waxaan nahay kuwo u qalma oo had iyo jeer diyaar u ah inaan kaa caawino soo gudbinta alaabada qiimaynta dhinac saddexaad markaad u baahato.
Ka qaybqaadashada Geedi-dejinta Heerarka
Ka qayb qaadashada samaynta xeerar qaran oo ku saabsan tayada biyaha, waxaan dejinnaa halbeegyo gudaha ah oo xitaa ka baxsan xeerarka qaranka. Marxalad kasta oo horumarineed ka hor inta aan la soo saarin badeecadda, waxaan ahmiyad weyn siineynaa qiimeynta tayada iyo badbaadada. Waxaan sii wadi doonnaa inaan ilaalino tayada badeecadaha si joogto ah, lagu kalsoonaan karo, oo ammaan u ah macaamiisha.
Biyo -nadiifiye Biyaha Adag, Taabo Nidaamka Shaandhaynta Biyaha, Nidaamka Dib -u -noqoshada ugu Wanaagsan, Kaydadka shaandhaynta, Beddelka Shaandhada Biyaha Kaydadka Biyaha, Guryaha Biyaha Sifeeya,